Humbowo hwekudzivirira ikozvino hunosungirwa kukwira VIA Rail chitima
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Rail Kufamba » Humbowo hwekudzivirira ikozvino hunosungirwa kukwira VIA Rail chitima
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Health News • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Humbowo hwekudzivirira ikozvino hunosungirwa kukwira VIA Rail chitima.
Kuitwa kwemutemo uyu unosungirwa wekudzivirira, zvinoenderana nemirairo kubva kuHurumende yeCanada, ichapa imwe yedziviriro kubva kuCOVID-19, uye kuita kuti zvitima zvive zvakachengeteka, kuitira kuti vafambi varambe vachifamba nechivimbo.
Gumiguru 30 - Vatasvi vane makore gumi nemaviri uye vakuru vanokwira VIA zvitima vanofanirwa kuratidza humbowo hwejekiseni kana inoshanda COVID-12 molecular test.
Mbudzi 30 - Vapfuuri vane makore gumi nemaviri uye vakura vanokwira VIA zvitima vanofanirwa kuratidza humbowo hwekudzivirira kuzere (COVID-12 mamorekuru bvunzo haichagamuchirwi).
Zvinoenderana nezvinodiwa neHurumende yeCanada, VIA Rail yakagadzirawo mutemo unosungirwa wekudzivirira vashandi vayo.
VIA Rail Canada (VIA Rail) iri kuburitsa gwara rayo rinosungirwa rekudzivirira rinoenderana nemirairo yatsanangurwa nhasi neTransport Canada. Via Rail's comphensive vaccination policy inoda kuti munhu wese ane makore gumi nemaviri ekuberekwa zvichikwira ari muzvitima zvedu aratidze humbowo hwekubaiwa kubva muna Gumiguru 12.
Kubvumidza vafambi nguva yekubaiwa zvizere, pachave nenguva yekuchinja yemwedzi mumwechete panguva iyo vafambi vachakwanisa kufamba kana vakaratidza bvunzo yeCCIDID-19 yemamorekuru mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekufamba. Iyi nguva yekuchinja ichapera musi wa72 Mbudzi, mushure mezvo vafambi vese vanofanirwa kubaiwa majekiseni akazara kuti vakwanise kukwira zvitima zvedu.
"Kuchengetedza hutano nekuchengetedzeka kwevanhu vedu, vafambi vedu uye veruzhinji hazvisi zvekunyanya kukosha, chinhu chakakosha chakadzika midzi VIARRailtsika uye basa iro isu tese tinogovana," akadaro Cynthia Garneau, Mutungamiriri uye Chief Executive Officer. "Kuitwa kwemutemo uyu wekutemesa vaccine, zvinoenderana nemirairo kubva kuHurumende yeCanada, ichapa imwe danho redziviriro kubva kuCOVID-19, uye kuita kuti zvitima zvedu zvive zvakachengeteka, kuitira kuti vafambi vedu varambe vachifamba nechivimbo."
Maererano neHurumende ye Kanadhazvinodiwa, VIARRail yakagadzirawo mutemo unosungirwa wekudzivirira vashandi vayo. Avo vasati vatanga chirongwa chavo chekubaya nhomba panosvika Mbudzi 15 vachaiswa pazororo rekutonga.
Kunyangwe neaya akaomesesa ekudzivirira marongero aripo pazvitima zvedu, mamwe ese aripo matanho anoitwa na VIARRail mukupindura COVID 19 inoramba ichishanda. Izvi zvinosanganisira, pakati pezvimwe, chinodikanwa chekupfeka masiki pazvitima zvedu, uye cheki yehutano isati yakwira kune wese mutyairi.